1. Healthcare (သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေး)
1.5ရာခိုင်နှုန်း Discount - Aroma
2. ၅၀၀ ကျပ် Special ကူပွန် ရယူလိုက်ရအောင် - Shwe Pa Lin
1. ဇူလိုင်လ ၁၆ရက်နေ့အတွက် ၇ရက်သားသမီးဗေဒင်
2. ၇ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း(၁၅-၇-၂၀၁၈) မှ (၂၁-၇-၂၀၁၈)
3. ဘယ်ပုံထဲက အစားအစာကို အကြိုက်ဆုံးလဲ
1. ပရိသတ်အယောက် (2500) တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် 2017 SXSW ၏ K-pop ည: Seoul အေဂျင်စီ
3. DIA holds media showcase for new album
1. ဖေဖေ့ သူငယ်ချင်း - Chapter 1
2. ကြိုးတန်း - Chapter 1
3. ကိုယ်​သိပ်​ချစ်​ရတဲ့သူကို လက်​ထပ်​ဖို့ဘယ်​လိုစည်းရုံးရမှာလဲ
မှတ်ပုံတင် သက်တမ်း နှစ် နှစ်ဆယ်၊ သုံးဆယ်၊ လေးဆယ် ရှိပြီ ဖြစ်သော ယာဉ်အို ယာဉ်ဟောင်းများကို ဖျက်သိမ်းပြီး မော်တော်ယာဉ် အသစ်များ တင်သွင်းခွင့် ပါမစ် ထုတ်ပေးမည်ဟု သက်ဆိုင်ရာမှ ကြေညာသည်။ ကားလောကသာမက တခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကိုပါ ရိုက်ခတ်သွားသည်။ မော်ဒယ်မြင့် ကားတွေ ဈေးပြုတ်ကျ သွားသည်။ အောက်ကား လေးတွေ ဈေးမြောက်လာ သည်။ အလယ်ကား ပိုင်ရှင်တွေကတော့ ထိုင်ငိုရမလို၊ ထပဲ ကရမလို အူလည်လည် ဖြစ်ကုန်ကြ ၏။ ဘာမဆို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟု ဆိုရိုးစကား ရှိသော ပရီမီယာလိဂ် ဘောလုံးပွဲတွေလိုပါပဲ။ ဒီတစ်ပတ်တော့ အသင်းကြီး တွေ အခြေ မလှဘဲ တန်းဆင်းဇုန်က အသင်းတွေ အောင်ပွဲခံကြသည်။ အောက်ကြေး စားတယ်ပဲ ဆိုပါတော့။ ဒိုင်ကြီးတွေ၊ ပွဲစားတွေ ကတော့ အေးဆေးပဲ။ (တချို့က အမနာပ ပြောကြ သေးသည်။ ဖိုးကပ်စ် တိုက်ပြီးသား ဆိုလားပဲ။) ခုလို ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်နေချိန် တစ်ညမှာတော့ ဆရာ ချစ်ဦးညို ဖုန်း လှမ်းဆက်သည်။
“ဒီလိုကွာ၊ ကိုယ်တစ်ခု စဉ်းစားမိလို့၊ သက်တမ်း ရင့်နေတဲ့ ကားအို ကားဟောင်းတွေ လိုပဲ၊ အိမ်ထောင်သက် အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော်တဲ့ မိန်းမဟောင်းတွေကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ သွားအပ်ပြီး အသက် အစိတ်ထက် မပိုတဲ့ မော်ဒယ်သစ် ကလေးတွေနဲ့ လဲယူခွင့် ပါမစ် ပြန်ထုတ်ပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့”
ဒီလူကြီး ဒါမျိုး ကြံစည်နေတာ ကြာပြီ။ ဆူဆူညံညံ အသံတွေကို ဖုန်းထဲမှ ကြားနေ ရသဖြင့် ကာရာအိုကေ ဘားကနေ လှမ်းဆက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိသာ၏။ ခပ်ထွေထွေနဲ့မို့ သူ့ အတွင်းစိတ်ထဲက ဆန္ဒအမှန်တွေ ပွင့်အန် ထွက်လာခြင်း ဖြစ်မည်။
“ဒါဆို အပျိုဟိုင်းကြီးတွေ ကျတော့ ဘယ့်နှယ် လုပ်မလဲဗျ”
ဟု ကျွန်တော်က ဆွပေးလိုက်တော့
“ဟာ ... သုံးမရတဲ့ ဒီအော်ဆွေးကြီးတွေ ကတော့ သံရည်ကျိုစက် ပို့ပစ်လိုက်တာပဲ ကောင်းတယ်”
သူ ပြောတဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာရင်တော့ အပျိုကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ဂျူး၊ ရာသက်ပန် (တောင်ငူဆောင်)၊ ဇွန်ပွင့်၊ မြူမြူ၊ ဝင်းဝင်းမြင့် (နန်းတော်ရှေ့) တို့တော့ ဒုက္ခပဲ။ ထို့အတူ ဆေးမန်းက ဆရာမ အပျိုကြီးတွေ အတွက်လည်း မဆီမဆိုင် လှမ်း စိတ်ပူလိုက် မိသေးသည်။ ကျွန်တော်လည်း နောက်ချင်ပြောင်ချင်စိတ် ပေါ်လာသဖြင့် ရာသက်ပန်ဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောပြလိုက်သော အခါ သူက-
“အမယ်၊ ကိုယ်တွေက အိုးမော်ဒယ် ဆိုပေမယ့် ယာယီနံပါတ်ပဲ ရှိသေးတာပါနော်”
အမှန်ကတော့ ဝယ်မယ့်လူ မရှိလို့ ရှိုးရွမ်းမှာ ငုတ်တုတ်ကြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် ဖြစ်မှာပါ။
ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ တစ်ခု သွားသတိရပြန်ပြီ။ ဟိုတစ်လောက ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကိုကျော်သူနဲ့ ရွှေဇီးကွက်တို့ အနှစ် သုံးဆယ်မြောက် မင်္ဂလာ အမှတ်တရ အခမ်းအနားကို ကျင်းပသွားသေးသည်။ သူတို့လည်း အိမ်ထောင်သက် နှစ်သုံးဆယ် ကျော်ပြီပေါ့။ သို့ရာတွင် ကိုကျော်သူ အနေဖြင့် ပါမစ်အသစ် တစ်စောင်ရဖို့ မျှော်လင့်ချက်တော့ မရှိနိုင်။ ရွှေဇီးကွက် ဆိုတာက သက်တမ်းရင့်လေ၊ တန်ဖိုး တက်လေဆိုတဲ့ ရိုးရွိုက်ကားလို၊ မာစီဒီးလိုမျိုး မဟုတ်လား။ (ကိုမောင်မောင်အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။)
ကျွန်တော်က ခုလို ပေါက်ကရတွေ လျှောက်ပြော၊ သူတို့ကို သံရည်ကျိုစက် ပို့မယ် ခြိမ်းခြောက်တာကို ရာသက်ပန်က သူ့အပေါင်းအသင်း SPICE GIRLS အဖွဲ့ကို ပြန်တိုင်သည်။ (SPICE = မဆလာ)
အခြားလူတွေက ရယ်နေကြသော်လည်း ကံ့ကော်ဝတ်ရည် စာပေမှ ကက်ကက်လန် မဝိုင်းကတော့ ထုံးစံအတိုင်း-
“ဟင်း ... ဒါဆို သူ့မိန်းမကျတော့ကော”
သူပြောတာ မှန်ပါသည်။ ကျွန်တော့် မိန်းမသည်လည်း သက်တမ်းလွန် ယာဉ်အို ယာဉ်ဟောင်း စာရင်းထဲ ဝင်နေပါပြီ။ သူ့ကို တန်ဖိုးကြီး ကမ္ဘာကျော် ထိပ်တန်းမှ ကားတွေနဲ့တော့ မတင်စားဝံ့ပါ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် လက်ကျန် ဗိုက်ပူ ဘတ်စ်ကားကြီး နဲ့သာ ခိုင်းနှိုင်းချင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ကလေး ဘဝက ဟိုနားဒီနား ငါးပြား ပေးရတဲ့ ခေတ်ကနေ ခရီးတစ်ဖြတ် ငါးဆယ်ကျပ် ဆိုသော ဒီနေ့ကာလအထိ သစ္စာရှိရှိ အသုံးတော်ခံခဲ့တဲ့ ကားကြီးတွေပေါ့။ ဇိမ်မကျပေမယ့် လုံခြုံစိတ်ချ ရသည်။ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသည်။ (မီးခိုးတော့ နည်းနည်း လိုက်နေပြီပေါ့။) ဒါပေမဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်လေး မှန်မှန် ထည့်ပေးထားရင် ခုချိန်ထိ ဒေါက်ဝူး ပါပဲ။)
ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်က ဗိုက်ပူကြီးကို သက်ဆိုင်ရာ သို့လည်း မအပ်နိုင်၊ သံရည်ကျိုစက် ကိုလည်း မပို့ရက်၊ ပါမစ်လည်း မလိုချင်။ တကယ်လို့ လုံးဝ မောင်းနှင်ခွင့် မရှိတော့ဘူး ဆိုလျှင်လည်း ဂိုဒေါင်ထဲ ထည့်ပြီး အမှတ်တရ သိမ်းထားလိုက် တော့မည်။
တပ်မတော်သားတွေဟာ လက်နက်ကို ကိုယ်နဲ့ မကွာ အမြဲတမ်း ရှိနေစေရသည်။ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်နဲ့ မှ မစွန့်ပစ်ရ။ ရန်သူ့လက် မပါစေရ။ အသက်နဲ့လဲပြီး ကာကွယ်ရမည်။ ထို့ကြောင့် “ငါသေမှ ငါ့လက်နက်ကို ရမည်” ဆိုသော ဆောင်ပုဒ်ကို ကိုင်စွဲ ထားကြရ၏။
“ငါသေမှ ငါ့မိန်းမကို ရမည်”
မိန်းမတစ်ယောက် ဟင်းချက် ကောင်းခြင်းသည် အိမ်ထောင်တစ်ခု သာယာတည်ငြိမ် ခိုင်မြဲရေးအတွက် အဓိက အချက်ပဲ လို့တော့ မပြောနိုင်။ သို့ရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ အထောက်အကူ ပြုသည်ဟု ထင်၏။
“ချစ်က ထမင်းဟင်း မချက်တတ်ဘူးနော်”
ဆိုလည်း ရတယ်။ အမေ ချက်ကျွေးလိမ့်မယ်။ ညားခါစမှာလည်း အရေးမကြီးသေး။
“ချစ်ရဲ့ လက်ရာဆိုရင် ကောက်ရိုးကို ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ လုပ်ကျွေးရင်တောင် တစ်သက်လုံး စားနိုင်ပါတယ်”
လို့ဆိုခဲ့ပြီး အိမ်ထောင် သက်ကလေး ရလာတော့မှ ပူညံပူညံ ဖြစ်တော့တာ။
ယောက်ျားများဟာ ထမင်းဆာလျှင် စိတ်တိုတတ်သည်။ ဒီကြားထဲကမှ ဟင်းကလည်း မကောင်း၊ လက်ရာကလည်း ညံ့နေလျှင် ဒေါသ ပေါက်ကွဲတော့တာပဲ။ လင်မယားတွေ ရန်ဖြစ်ကြရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ထဲမှာ ဟင်းကိစ္စက အကြိမ် အများဆုံးတောင် ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆိုင်မှာ ဝယ်စားလဲ ရတာပဲဟု စောဒက တက်စရာ ရှိ၏။ သို့ရာတွင် ခံစားမှုချင်း မတူကြောင်း ဆိုင်ထမင်းဟင်း စားနေကျလူတွေ သိလိမ့်မည်။ ဘယ်လောက် စားကောင်းတဲ့ ဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူချက်တာလဲ ဆိုတာ မသိရ။ တစ်နည်းအားဖြင့် သူစိမ်းတစ်ယောက် ချက်တဲ့ ထမင်းဟင်းကို စားရတာ။ ဆိုင်က ဝန်ထမ်းတွေ ဆိုတာကလည်း တာဝန် အရသာ ဧည့်ဝတ် ကျေနေရတာ။ တကယ့် နွေးထွေးမှု အစစ်မဟုတ်။ စားလို့ပြီးရင် ငွေရှင်းရမည်။ အပေးအယူ သဘော။ ပြီးတော့ ထပြန်ပေတော့၊ အိမ်မှာလို ပက်လက် ကုလားထိုင်လေးပေါ် ထိုင်ရင်း ထမင်းလုံးစီလို့ မရ။ တစ်မှေးမှေးလို့ မဖြစ်။ ဆိုင်က ထမင်းဝိုင်းသည် အလုပ်သဘော ဆန်သည်။ ဝိညာဉ် ကင်းမဲ့နေသည်။
ထမင်းဟင်း ကိစ္စသည် အိမ်ထောင်သက် ရင့်လာလေ ပို၍ အရေးပါလေပင် ဖြစ်၏။ မိန်းမ တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက် ပဲ လှလှ တစ်အိမ်ထဲမှာ ကြာကြာနေရင် ရိုးသွားမှာပဲ။ အလှအပ ဆိုတာကလည်း အသက်ကြီးလာရင် ပျက်စီးမှာပဲ။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်တွေ၊ အသားအရေ စိုပြေ ချောမွေ့မှုတွေကလည်း အရွယ်နဲ့အမျှ ယိုယွင်းလာမှာပဲ။ ဟင်းချက်ကောင်း တယ်ဆိုတဲ့ အရည်အချင်းကတော့ ဘယ်တော့မှ ယုတ်လျော့ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်။ လေးဆယ်ကျော်လည်း ဒီလက်ရာ ပဲ။ ငါးဆယ်၊ ခုနစ်ဆယ်၊ ရှစ်ဆယ်လည်း ဒီလက်ရာပဲ။ အချိန် ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ကိုယ့်ယောက်ျားရဲ့ အကြိုက်ကို ပိုတောင် သိလာသေးသည်။
ခုလို နိဒါန်းရှည်ကြီး ချီနေပြီ ဆိုကတည်းက ကျွန်တော် ဘယ်အချိုး ချိုးတော့မယ် ဆိုတာ စာနယ်ဇင်း ဆရာကြီးများ သိပြီးဖြစ်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
ဟုတ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမ ဟင်းချက်ကောင်းကြောင်း ပြောမလို့ပါ။
ကျွန်တော် သူ့ကို ချစ်ခဲ့တာ ဟင်းချက် ကောင်းကြောင်း ကြိုသိလို့ မဟုတ်။ တခြား ယောက်ျားလေးတွေ လိုပဲ ဒီကောင်မလေး မဆိုးဘူး၊ လှတယ်ဆိုပြီး ချစ်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်၏။ ကြိုက်ခါစတုန်းကဆို သူ့ရဲ့ ခေတ်မီ ဝတ်စားဆင် ယင်ပုံကို ကြည့်ပြီး ထမင်းအိုး တစ်လုံးတောင် ဖြောင့်အောင် တည်နိုင်ပါ့မလား မသိဘူးဟု အထင်သေးမိ သေးသည်။ နောက်ပိုင်း သူတို့အိမ် သွားလည်ရင်း သူ့လက်ရာကို စားရတော့မှ ငါတော့ ဒီတောင်က မကျော်နိုင်တော့ဘူးလို့ ဝန်ခံ လိုက်ရတာ။
သူ အလုပ်ရပြီးနောက် ည နေ ရုံးဆင်းချိန်မှာ သွားကြိုသည်။ လော်ကယ်ရထား စီးသည်။ ဘူတာ ဈေးကလေးမှာ သားငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်သည်။ သူ့အိမ်သို့လိုက် သွားသည်။ သူဟင်းချက် နေချိန်မှာ ကျွန်တော်က ငရုတ်သီး ထောင်းပေး သလိုလို၊ ဘာလိုလို လုပ်ရင်း စကားပြောသည်။ ပြီးတော့ ထမင်း အတူတူ စားကြသည်။ တစ်ပတ်မှာ သုံး၊ လေးရက်တော့ သူတို့အိမ်မှာ ညနေစာ စားဖြစ်၏။
ကျွန်တော်တို့အမေ ပြော ဖူးတာ ရှိသည်။
“မင်းတို့နော်၊ ခုချိန်မှာတော့ အမေ ကောင်းကောင်း ချက်ကျွေးမယ်၊ အိမ်ထောင် ကျပြီးလို့ ထမင်းဟင်း ကောင်းကောင်း မချက်တတ်တဲ့ မိန်းမမျိုးနဲ့ တွေ့ရင်တော့ ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ ကိုယ့်ကံပဲ။ အဲဒီအခါကျတော့ မင်းတို့ မိန်းမတွေက မင်းတို့ကို ချီးလေးနဲ့ပဲ ကျွေး ကျွေး၊ အမေ ဘာမှ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှာ မဟုတ်ဘူး”
ကျွန်တော်က ဒီစကားကို မှတ်ထားသည်။ တစ်ရက်မှာ ရည်းစားအိမ်မှာ ညနေစာ စားပြီးမှ ပြန်လာတော့ အမေက-
“ဘာဟင်းများ ချက်ကျွေး လိုက်သလဲ”
“ချီးနဲ့ ကျွေးလိုက်တယ် အမေ”
ဟု ဖြေသောအခါ အမေက မျက်စောင်းထိုးသည်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ထပ်ပြီး မိန်းမက အိမ်ကို ရောက်လာ၊ တစ်အိုးတည်း စားကြတဲ့ အခါကျမှ အမေကိုယ်တိုင်က သူ့လက်ရာကို ခံတွင်းတွေ့ သွားသည်။ ဟိုဟာလေး ချက်ကျွေးစမ်းပါဦး၊ ဒီဟာလေး မစားရတာ ကြာပြီဆိုပြီး တောင်းဆို တတ်လာသည်။ မကြာခဏ ဆိုသလို သူတို့ နှစ်ယောက်အပြန်အလှန် နည်းပညာ ဖလှယ်ပြီး ပိုမို ကောင်းမွန်သော အစပ်အဟပ်တွေ ပူးပေါင်းတီထွင် ကြသေးသည်။
ဟင်းချက်ကောင်းတယ် ဆိုတာက ပစ္စည်းကောင်း သုံးနိုင်တာနဲ့လည်း မဆိုင်၊ အစပ်အဟပ် တည့်ဖို့ လက်အဆ မှန်ဖို့အပြင် စိတ်ရှည်ဖို့နှင့် အချက်အပြုတ် ဝါသနာပါ ဖို့လည်း လိုသေးသည်။
ကျွန်တော့် မိန်းမ ဟင်းချက်ကောင်းတယ် ဆိုတာ အဲဒါတွေကြောင့်ဟု ထင်သည်။ သူက သားကြီး ငါးကြီးမှ မဟုတ်။ အရံဟင်းလေးတွေ ကိုပါ စားကောင်းအောင် လုပ်တတ်သည်။ ခရမ်းချဉ်သီး ပန်ထွေဖျော်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ငါးပိချက်၊ မရမ်းသီးထောင်း၊ ခရမ်းသီးနှင့် ကြက်ဥမွှေကြော်၊ ပုန်းရည်ကြီးသုပ် စသည်ဖြင့်။ သူနှင့် ပေါင်းပြီးမှ ကျွန်တော် ဘယ်တုံးကမှ မကြိုက်တတ်သော ကြက်ဟင်းခါးသီးချက် ကိုတောင် မက်မက်မောမော စားတတ်လာသည်။
အသားဟင်း ဆိုရင်တော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ သူက ခြေလေးချောင်းသားကို ငယ်ငယ်ကတည်းက မစားဘဲ ရှောင်ခဲ့သူ ဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်တို့ စားဖို့တော့ ချက်ပေးသည်။ လုံးဝ မြည်းမကြည့်ဘဲ အစပ်အဟပ် တည့်အောင် ချက်နိုင်တာ ပညာပဲ။
သူ ချက်တဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ ဖေးဖရိတ်ကတော့ ဝက်သားနဲ့ မျှစ်ချဉ်ပေါ့၊ သူက ဝက်သား မစားသဖြင့် မျှစ်ချဉ်ကို ငါးနှင့် အရင်ချက်သည်။ ကျက်ပြီဆိုမှ အိုးခွဲပြီး ဝက်သား သုံးထပ်သားကို ထည့်၊ မီးမျှဉ်းမျှဉ်းနဲ့ ပြန်တည်။ ငါးနဲ့ ဝက် အရသာ နှစ်မျိုးပေါင်းတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ တစ်ခါတလေ၊ ဝက်ဆီဖတ် ထည့်သည်။ ကျွန်တော်ကလည်း ဝက်သားနဲ့မျှစ်ချဉ် ဆိုလျှင် နောက်တစ်နေ့ကျမှ ဆေးရုံတက်ရင် တက်ရပစေ။ လောလောဆယ်တော့ တဝကြီး ကိုင်ပစ်လိုက်တာပဲ။
သူက ထမင်းဟင်းပဲ ချက်တတ်တာ မဟုတ်။ မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲလည်း ကောင်းကောင်း ချက်တတ်သည်။ စားဖူးသူတွေက မုန့် ဟင်းခါးဆိုင် ဖွင့်လျှင် လူကြိုက်များမှာပဲဟု ပြောကြသည်။ သူသာ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင် ဖွင့်ဖြစ်လျှင် ရွှေဥတို့၊ မြောင်းမြဒေါ်ချိုတို့လို နာမည် ကြီးချင် ကြီးလာနိုင်သည်။ ကျွန်တော်လည်း စာတွေ တကုပ်ကုပ် မရေးရတော့ဘဲ ကောင်တာမှာ ငွေထိုင်သိမ်းရုံ ဆိုရင် ဇိမ်ပဲ။
ခေါက်ဆွဲသုပ်၊ ကြာဆံကြော်၊ ထမင်းကြော်၊ ကော်ပြန့်စိမ်း ဆိုတာတွေက အိမ်မှာ အပျင်းပြေ လုပ်စားတာ။ စိတ်လိုလက်ရ ရှိတဲ့အခါ ငါးထမင်းချဉ် လုပ်ကျွေးသည်။ သူက ရှမ်းခေါက်ဆွဲတော့ ကိုယ်တိုင် တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးသေး။ ဒီတော့ ရှမ်းစာတွေ ရောင်းသော ကုန်ခြောက်ဆိုင်ကို သွားသည်။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ လုပ်နည်း မေးသည်။ ပစ္စည်းအစုံ ဝယ်လာပြီး သူ့ဘာသာ လုပ်သည်။ သမီးတွေကရော သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေကပါ စားကြည့်ပြီး ဆိုင်တွေမှာ စားတာထက် ပိုကောင်းတယ်ဟု ထောက်ခံကြသည်။
မုန့်ဟင်းခါး ချက်စားတဲ့အခါ အချိန်ရလျှင် ဘူးသီးကြော်၊ ကြက်သွန်ကြော် သူ့ဘာသာ ကြော်သည်။ အပြင်က ဝယ်စားတဲ့ ဗယာကြော်တွေ စားမကောင်းလို့ ဆိုပြီး သူ့ဘာသာ ကြော်တတ်သေးသည်။ နာမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင်တွေက တမ်ပူရာ ကြော်ကို စားကြည့်၊ ဒါများ၊ ဘာခက်လို့လဲ ဆိုပြီး အိမ်မှာ ကြော်ကျွေးသည်။ နာမည်ကြီး မစ္စတာ ဂီတာဆိုင်က လက်ရာကို မီသည်။ သူ စပ်တဲ့ အချဉ်ရည်က ပိုကောင်းသေးသည်။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်အတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်စရာ ဟင်းတစ်မျိုး ရှိသေးသည်။ သမီးရည်းစား ဘဝတုန်းက ရုံးပိတ်ရက် တစ်ရက်မှာ သူ့အိမ်သို့ ရောက်သွားသည်။ ထမင်းစားချိန် လွန်နေပြီ။
သူက မေးသည်။ ကျွန်တော်က-
“မစားရသေးဘူး၊ ဒီရောက်မှ စားမယ်ဆိုပြီး ...”
“အဲဒါမှ ဒုက္ခပဲ၊ ဟင်းတွေ အိမ်ကစားလို့ ကုန်ပြီ၊ ဘဲဥတော့ ရှိတယ်။ ကြော်ပေးရမလား”
အမေ ချက်လေ့ရှိသော ဟင်းကို သွားသတိရသည်။ ဘဲဥအချဉ် ဆီပြန် ဖြစ်၏။ ထူးခြားတာက ဘဲဥကို သမားရိုးကျ အတိုင်း ပြုတ်ပြီးမှ ခွဲခြမ်း ထည့်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အလုံးလိုက် အစိမ်းအတိုင်း ဖောက်ထည့်ခြင်း ဖြစ်၏။ ဟပ်ဖရိုက် ပုံစံ အပြားလိုက် ဖြစ်သည်။ ဘဲဥဖောက်ချက်ဟု ခေါ်သည်။ မြန်လည်း မြန်၊ လွယ်လည်း လွယ်သည်။ အရည်လေး အနှစ်လေးနဲ့ ဆိုတော့ စားလို့လည်း ကောင်းသည်။
“အင်း ... မဆိုးဘူး၊ စမ်းကြည့်မယ်”
ဆိုပြီး သူ ချက်တော့သည်။ ပြီးတော့ မြည်းကြည့်ပြီး-
“တစ်ခုခု လိုနေသလိုပဲ၊ ဟုတ်ပြီ”
ဟင်းထဲကို ဂေါ်ရင်ဂျီ မဆလာ ဖြူးလိုက်သည်။ မွှေးတက်လာသည်။ ဂဏန်း မဆလာချက်လို အရသာမျိုး။ သူ ချက်တာက အမေ့ဟင်းထက်တောင် ပိုကောင်းသေးသည်။
တစ်ခါတော့ သူနှင့် ကျွန်တော် ကတောက်ကဆ ဖြစ်ကြသည်။ (ကျွန်တော်က တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်တာ။) သူကတော့ ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ သုန်သုန်မှုန်မှုန်ကြီးသာလုပ်နေသည်။ ရုံးကအပြန် ခါတိုင်းလို ဘူတာဈေးမှာသားငါးမဝယ်တော့ဘဲ အိမ်ကိုသာ တန်းသွားသည်။
ကျွန်တော် စိတ်ဆိုးပြီး ဆက်မလိုက်ဘဲ လှည့်ပြန်ဖို့ စိတ်ကူးပြီးမှ သူတို့အိမ်အထိ ပါသွားသည်။ သူက နောက်ဖေးဘက် ဝင်သွားသည်။ ကျွန်တော်က ဧည့်ခန်းမှာ စူပုပ်ပုပ် မျက်နှာထားဖြင့် ငူငူကြီး ထိုင်နေသည်။ တော်တော်လေးကြာတော့ သူ ဧည့်ခန်းဝမှာ လာရပ်ပြီး-
ဟု ပြောမယ် ကြံသော်လည်း ဗိုက်က တော်တော် ဆာနေပြီ။ တာဝန်အရ လိုလို၊ စိတ်မပါ သလိုလို လုပ်ရင်း လိုက်သွား သည်။ ထမင်းစားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ဘဲဥဖောက်ချက်ဟင်း။ မဆလာနံ့က ဝေ့ခနဲ ဝင်လာသည်။ သွားရည် တောင် ယိုချင်လာ၏။
ထမင်းတွေကို အကြောင်းမဲ့ လျှောက်ဖွရင်း အိုက်တင် ခံနေလိုက်သည်။ သူက ဟင်းခပ် ထည့်ပေးသည်။ ဆာနေလို့ပဲလား မသိ။ ဒီနေ့ကျမှ ဟင်းက ပိုအရသာ ရှိနေသည်။ ထမင်း တစ်ပန်းကန် ကုန်ပေမယ့် မဝသေး။
ဟု ပြောပြီးမှ ပန်းကန်ကို ရှေ့တိုးပေးမိ၏။ သူက ထမင်း ထပ်ထည့် ပေးသည်။ ဒုတိယ ပန်းကန် ကုန်ပေမယ့် အာသာ မပြေသေး။ သူက အထာ ပေါက်သွားလို့လား၊ စားပြီးသွားလို့လား မသိ။ သူ့ ပန်းကန်ကို ယူပြီး ရှောင်ထွက် သွားသည်။ သူကျောပေးပြီး ပန်းကန် ဆေးနေတုန်း ထမင်း မြန်မြန် ထည့်စားရသည်။
ကျွန်တော်က အစားနည်းသူ ဖြစ်သည့်တိုင် ဒီနေ့တော့ ဗိုက်တင်းအောင် စားပစ်လိုက်သည်။ မဆလာ အရှိန်ကြောင့် ချွေးတွေလည်း ပြန်လာသည်။ စိတ်ဆိုးလည်း ပြေသွားပြီ။ ကျွန်တော် သူ့ ဘေးမှာ သွားထိုင်ပြီး လက်ဆေးရင်း-
ဟု လေပြေထိုးလိုက်သည်။ သူက လှည့်မကြည့်ဘဲ-
“ပုလင်းထဲမှာ ထန်းလျက် ရှိတယ်”
ဒီနည်းဗျူဟာက တင်းမာမှု လျော့ပါးရေးအတွက် အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း သူသိသွားဟန် တူသည်။ နောက်နောင် ကျွန်တော် စိတ်ဆိုးနေတဲ့ အခါတိုင်း ဟင်းကောင်းကောင်းလေး ချက်ကျွေးတတ်တာ ခုထိပါပဲ။ ကျွန်တော်ကလည်း တဖြည်းဖြည်း ပို၍ ပို၍ ဒေါသကြီးတတ် လာလေတော့သည်။
တစ်လောက သူ့အစ်မ တစ်ယောက် အိမ်လာလည်သည်။ တခြား ကျွေးစရာ မရှိသဖြင့် မရမ်းသီးမှည့်တွေ ချကျွေးသည်။ မရမ်းသီးနဲ့ တို့စားလို့ ရအောင် ဆိုပြီး ကျွန်တော့် မိန်းမက ဆားရယ်၊ နွယ်ချိုရယ်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်ရယ် ရောစပ်ပေးသည်။ သူ့အစ်မ ပြန်တော့ မရမ်းသီးတွေ ထည့်ပေးသည်။ ကျန်တဲ့ ဆားတွေကိုပါ အိတ်ကလေးနှင့် ထည့်ပေးလိုက်သည်။
သူ့အစ်မ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကလေးတွေက မရမ်းသီးကို ဆားနှင့် တို့စားကြရင်းက သားအငယ်ကောင်က-
“ဆားလေး ကောင်းလိုက်တာ၊ ဘယ်က ဝယ်လာတာလဲ”
“အဲဒါ ဝယ်လာတာ မဟုတ်ဘူး၊ နင့်အဒေါ် လုပ်ပေးလိုက်တာ”
ဆိုတော့ သားလုပ်တဲ့လူက ...
“အန်တီတို့များ ဆားတောင် အရသာရှိအောင် လုပ်တတ်တယ်၊၊ ဦးဦးက သိပ် ကံကောင်းတာပဲနော်”
ကျွန်တော့် မိန်းမက ဒီအကြောင်းကို ဂုဏ်ယူသော လေသံဖြင့် ပြန်ပြောပြသည်။ ကျွန်တော် ပြုံးနေတော့ သူက
“အင်း ... ဟုတ်ပါတယ်”
ဆိုပြီး ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ရသည်။ စိတ်ထဲကတော့-
“အဲဒီ ဆားလေးတစ်တို့ မြည်းခွင့်ရဖို့ ငါ့ဘက်က ဘယ်လောက်ထိ အရင်းအနှီး စိုက်ထုတ်ခဲ့ရသလဲ ဆိုတာကိုတော့ သူတို့ မသိကြဘူးနော်”
၁၁-၁၁-၁၁ သို့ အမှတ်တရ